ဆန်နီနေမင်း: May 2010
ပညာပါရမီရှင် မယ်တော်ကြီး ဒေါက်တာဒေါ်သက်သက်နွယ်နှင့်...
28.05.2010. နေ့က ဒါနသီရိလင်္ကာအဖွဲ့မှ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၌ Ph.D. M.phi. M.A. B.A ပညာ သင်ကြားနေကြသော မြန်မာသံဃာတော်များအား စင်္ကာပူ၊ ဘရူးးနိုင်း၊ အမေရိကန်၊ ထိုင်း၊ ကိုးရီယားစသော နိုင်ငံများမှ ပညာပါရမီရှင် ဒကာ-ဒကာမများမှ ပညာပါရမီ ထောက်ပံ့သော ပွဲပြုလုပ်ပါသည်။
ဘရူးးနိုင်းနိုင်ငံမှ ပညာပါရမီရှင် မယ်တော်ကြီး ဒေါက်တာ ဒေါ်သက်သက်နွယ်နှင့် စင်္ကာပူနိုင်ငံမှ ပညာပါရမီရှင် မယ်တော်ကြီး ဒေါ်တင်တင်မြင့်တို့မှ ဒါနသီရိလင်္ကာအဖွဲ့၏ကိုယ်စား ဦးဆောင်ပြီး လာရောက်လှူဒါန်း ကြပါသည်။ ပညာပါရမီရှင် မယ်တော်ကြီးတို့ ဦးဆောင်သော ဒါနသီရိလင်္ကာ အဖွဲ့သည် (၁၅)ကြိမ်မြောက် လာရောက် လှူဒါန်းခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
Posted by ဆန်နီနေမင်း at 5:53 PM0comments Links to this post
စာရေးသူနှင့် ပညာပါရမီရှင် မယ်တော်ကြီးမှ သံဃာတော်များအား လှူဒါန်းမှုပြုစဉ် The writer and Mea Daw Gyi and friends donated money to the monks in Sri Lanka
ပညာပါရမီရှင် မယ်တော်ကြီး ဒေါက်တာဒေါ်သက်သက်နွယ်နှင့် ဒေါ်တင်တင်မြင့်
Posted by ဆန်နီနေမင်း at 4:08 PM0comments Links to this post
ဒီခေါင်းစဉ်လေးကို တင်ပြဖို့ စဉ်းစားထားတာ ကြာပါပြီ၊ ဘာဖြစ်လို့ တင်ပြချင်တာလဲဆိုတော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိသော လူသားအားလုံးရဲ့လိုအပ်ချက်ဟာ ဘာလဲဆိုတော့ လူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့က အဓိက Main ဖြစ်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် လူတော်လူကောင်းဆိုတာ ဘယ်လိုအရာတွေနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့လူတွေကို ခေါ်တာလဲဆိုတာလည်း မသိတဲ့လူတွေကလည်း သိချင်ကြမှာဖြစ်သလို သိတဲ့လူတွေလည်း ထပ်ပြီးပြည့်စုံသလောက်ရှိအောင် မိမိသိသလောက်လေးကို အထောက်အထားလေးတွေနဲ့ တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီစာတွေကို ရေးတာဟာ မိမိကိုယ်တိုင် သိလို့ရေးတာ မဟုတ်သလို ဆရာကြီးလုပ်ချင်လို့ ရေးတာလည်း မဟုတ်ဘူးဆိုတာတော့ စာဖတ်သူတို့ ယုံကြည်စေချင်ပါတယ်။ ဒီလူတော်လူကောင်းခေါင်းစဉ်ကို ရေးသားရာ၌ မှားယွင်းမပြည့်စုံများ တွေ့ရှိခဲ့လျှင် “ကျရောက်မြူသွင်၊ အပြစ်မြင်က၊ တင်၍နှုတ်သာ၊ ကဲ့ရဲ့ပါနှင့်၊ လျင်စွာထောက်ကူ၊ ပြင်တော်မူရှင့်”ဟု အရှင်ပညာတိက္ခ ရေးသားထားသည့်အတိုင်း အပြစ်မမြင်အမှန်ပြင်၍ သူတော်ကောင်းစိတ်ဖြင့် ဖတ်ရှုစေလိုပါသည်။
Posted by ဆန်နီနေမင်း at 1:48 AM 1 comments Links to this post